(Europe) 13 Juunyo 2018. Waxaan dib u amba qaadi doonnaa xubinteenii Saakay iyo Wargeysyada oo inoo socon doona inta uu ka xiramayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda insha’alaah.
Weeraryahanka Atletico Madrid Antoine Griezmann, 27-jir ayaa sheegay inuu qaatay go’aan ku aadan mustaqbalkiisa, laakiin wiilka reer France ayaa diiday inuu caddeeyo halka uu ka ciyaari doono kal ciyaareedka soo socda. (ESPN)
Manchester United ayaa go’aansatay inaysan 50-milyan oo bound ugu dhaqaaqin daafaca Tottenham iyo xulka England Danny Rose, 27-jir. (Telegraph)
Goolhayaha Manchester United David De Gea 27-jir ayaa waxaa bartilmaameedsan kara Real Madrid, Wiilka reer Spain wuxuu xiriir fiican la leeyahay macallinak cusub ee Real Julen Lopetegui. (Mail)
Macallinka Newcastle United Rafa Benitez ayaa si dhab ah ugu fakiray xilka xulka Spain kaddib markii Lopetegui loo Magacaabay macallinka cusub ee Real Madrid. (Northern Echo)
Newcastle United ayaa la arkaa inay u baahato inay jabiso Rikoodhkeeda suuqa kala iibsiga haddii ay doonayaan inay kooxda dib ugu soo celiyaan 22-jirka reer Brazil ee Kenedy, Chelsea waxay doorbideysaa inay iibiso xiddiga garabka ka ciyaara halkii ay Amaah dib ugu diri lahayd. (Chronicle)
Chelsea ayaa qarash gareyn doonta 30-milyan oo bound si ay u soo xero galiso xiddiga qadka dhexe ee Aston Villa Jack Grealish, 22-jir. Blues ayaa sidoo kale dooneysa inay Grealish amaah ugu celiso Aston Villa xilli ciyaareedka 2018-19 , laacibka reer England ayaa doonaya inuu Villa Park sii joogo 12-bilood oo kale. (TeamTalk)
Chelsea ayaa Juventus kula loolameysa saxiixa daafaca Atletico Madrid iyo xulka Montenegro Stefan Savic, 27-jir. (Sky Sports)
Dhanka kale, Macallinkii Napoli Maurizio Sarri ayaa weli ah musharaxa la doorbidayo inuu xilka Chelsea ka badelo Antonio Conte . (Evening Standard)
Kooxda xafidaneysa Premier League ee Manchester City ayaa ku guul darreysatay inay heshiis kordhin waqti dheer ah la gaarto xiddiga garabka ka ciyaara ee reer England Raheem Sterling 23-jir. (Sky Sports)
Liverpool ayaa ka fikireysa dooqyadeeda Goolhaye kaddib markii ay Roma sheegtay inaysan iibin doonin goolhayaheeda reer Brazil Alisson Becker, 25-jir. (Liverpool Echo)
Xiddiga qadka dhexe ee Yacine Adil, 17-jir ayaa mustaqbalkiisa u balan qaadi doona PSG iyadoo ay jirto in lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqao Arsenal. (RMC)
Manchester United uma diyaarsana inay bixiso 60-ka milyan ay Juventus ku dooneyso daafaceeda reer Brazil ee Alex Sandro 27-jir. (Daily Record)
Manchester United ayaa loo soo bandhigay fursada ay kula soo saxiixaneyso xiddiga qadka dhexe ee PSG Marco Verratti 25-jir. Wiilka reer Talyaani ayaa la warinayaa inuu doonayo inuu xagaagan ka soo tago qalcada Parc des Princes. (Calciomercato)
Xiddiga qadka dhexe ee Sevilla Steven N’Zonzi ayaa sheegay inuu doonayo inuu u ciyaaro koox wayn. 29-jirka reer France ayaa lala xiriirinayay inuu u soo dhaqaaqo Arsenal. (Sun)
Xiddiga qadka dhexe ee NiceJean-Michael Seri ayaa doonaya inuu xagaagan u soo dhaqaaqo Ingiriiska, Arsenal iyo Chelsea ayaa wada xiiseynaya saxiixa 26-jirka reer Ivory Coast. (L’Equipe)
Kylian Mbappe oo ka soo hadlay dhaawiciisa iyo codsi uu u gudbiyay taageerayaasha Faransiiska
DEG DEG: Tababaraha Cusub ee Real Madrid oo Baxar ku jiray iyo xilka oo laga qaadi rabo...(Maxaa Cusub?)